‘केसाम्वाको कथा र केलाङको यात्रा’ - Naya Online
‘केसाम्वाको कथा र केलाङको यात्रा’
नयाँ अन्लाईन शनिबार, फाल्गुन १८, २०७५ (March 2nd, 2019 at 3:28am ) फिचर, ब्लग
ताप्लेजुङको मिक्वा खोलाबाट सुरु हुन्छ उनको कथा । याक्थुङ किंवदन्तीअनुसार उहिले ताँतीका ताँत छरछिमेक र छोराछोरीहरू बसाइँ सर्दा बूढाबूढीहरू रोएर बगेको आँसुबाट मिक्वा वहङ (आँसु खोला) भएको एउटा मिथक छ । आँसु र दुःखकै भारीका कथाहरू मात्रै नभएपनि उनका जीवन गाथा कलापारखीहरूका लागि खोलाको गीतजस्तै हुन सक्छ । जनवरी महिनाको दोस्रो दिन बेलायतको चार महिने बसाइँ सकेर नेपाल हुँदै ब्रुनाईको काममा फिर्न भारी कस्दै थिए गोपीलाल लिवाङ । आसफोर्डको सिङ्गलटनस्थित आफ्नै निवासमा उनले कथा जोड्न थाले ।
मुन्धुङ्गेका चार भाइ सन्तानमध्येका रहेछन् फेम्सङ लिवाङ । मुना इङ्वाहाङ, मुन्धुङ्गे हुँदै फेम्सङ लिवाङसम्म आइपुग्दा ताप्लेजुङको लिवाङ र खोक्लिङ गाउँमा सर्लक्कै बसेका रहेछन् लिवाङ थरी लिम्बुहरू । यसरी, खोक्लिङमा बसेका छ मध्येका दुई सुब्बाहरूतर्फका सन्तान रहेछन् गोपीलाल । गाउँमा अझै पनि उनका खलकलाई बगाले सन्तान भनिँदो रहेछ । बलबहादुर लिवाङ र धनरानी फागो वनेमका माइला छोरा लिवाङ उमेरले साठी पुग्न अझै दुई वर्ष छ । बगालेमा जन्मेका उनले भानु स्मृति माविबाट प्रवेशिका परीक्षा दिँदा कर्ण पराङ्देन र अहिलेका प्रदेश सांसद सर्वध्वज साँवापछि खोक्लिङ गाउँमै उनी तेस्रा लिम्बु भएका थिए । एक साल मात्रैअघि उनले सान्थाक्राकी धनकुमारी सिरेङ चोङवाङलाई दुलही बनाएका थिए ।
सन् २००५ मा ब्रुनाईमा चासोक तङ्नाम मनाउने निर्णय भयो । यसअघि, सन् १९९२ मा कैलाश मादेनको सक्रियतामा गठन भएको ‘किरात एकता सहमति सङ्घ’ मा आबद्ध लिम्बु, याक्खा, सुनुवारहरूले राई जातिकै ढोल बोकेर साकेला नाचिरहेका थिए । जातीय पहिचान लोप हुने डर भएपछि लिवाङले पहिलोपटक चासोकमा लिम्बु जातिको मौलिक नृत्य च्याब्रुङ नाच देखाउने जमर्को गरे । तर, च्याब्रुङ बाजा कसरी बनाउनेमा ठूलो द्विविधा भयो । उनले दुःखसुख रबरको भाडा र प्लाष्टिक बटुलेर बनाए र नाचे भगत सुब्बाको गीतमा । दोस्रो पटक, कक्फेक्वा तङ्नाम चाड आयो । मकैको तेल भण्डारण गर्ने टिनको भाडा प्रयोग गरे । यतिले पनि पुगेन उनलाई । अर्कोपटक, यक्वा तङ्नाममा फलामको ढ्वाङ खोजे । वेल्डिङको सहायताले एकातिर सिन्थेटिक र अर्कातिर बाख्राको छालाले छोपे । प्वाङ प्वाङ !!! र भ्वाङ भ्वाङ !!! आवाज आयो । उनी सन्तुष्ट भएनन् । सन् २००६ मा उनले काठबाट बाजा बनाउने मनसायमा पुगे । एक सालपछि, सात सय डलरमा ब्राजिलियन मेसिन खरिद गरे । बल्ल ब्रुनाईको राष्ट्रिय रूख एल बी प्रजातिको मुढामा उनको आँखा पुग्यो । यसबीचमा उनले तीन सय जति च्याब्रुङ बाजा बनाए । धेरै त उनले उनको केजोक् केलाङ अभियानअन्तर्गत निःशुल्क वितरण गरे । केलाङ (च्याब्रुङ नाच) बुझ्नकै लागि उनले नेपालको पूर्वी लिम्बुवान क्षेत्र डुले । क्यामेरामा पाए जतिका सबै प्रकारका नाचहरू कैद गरे ।
प्रस्तुति: अमित याक्थुङ्वा
कला वार्ता ताप्लेजुङको मिक्वा खोलाबाट सुरु हुन्छ उनको कथा । याक्थुङ किंवदन्तीअनुसार उहिले ताँतीका...
देवेन्द्र सुर्केली सुदुरपूर्वी नेपालको ताप्लेजुङको फुङ्लिङमा जन्मिएका हुन् सुरोज मादेन । वि.सं. २०२५ सालमा...
सिने क्षेत्रमा शोम्या
काठमाडौं, भदाैं ६ । नेपाली मोडलिङ र कलाकारिता क्षेत्रमा एक दशक देखि लागि पर्दै...
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार उदघाटनपछि जनकपुरदेखि भारतको अयोध्यासम्मका लागि शुक्रबार प्रस्थान गर्ने बस...